အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအခမဲ့ Forex အညွှန်းကိန်းအခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် အခမဲ့ Forex အညွှန်းကိန်း, အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator 5
အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / အမြတ်နေ့ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာသည်အောက် Indicator
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့အမြတ်အစွန်းကိုတင်ပြ တစ်ရက်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ ယင်းကို သုံး. အဆုံးစွန်ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator.
ထို့အပြင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လည်းမရှိ အခမဲ့ညွှန်ပြချက် ဤအအစွမ်းထက်တဲ့သေးရိုးရှင်းတဲ့နေ့ကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအဘို့ထူးခြားတဲ့ entry ကိုအချက်ပြပေး။
"အရာအားလုံးတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ပေမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ရပါမည်။ " - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
အဆိုပါ အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကုန်သွယ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထဲက guesswork နှင့်ငွီးငှေ့ဖှယျဇယားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့တွေအများကြီးယူပြီးပါလိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင်ညွှန်ပြချက်သုံးပြီးတစ်ဦးထက်ပိုတထောင်ကုန်သည်များပြီးသားရှိပါတယ်။ to-date ဖြစ်အောင်လက်ခံရရှိသော feedbacks အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ခဲ့ကြပြီ။
အတော်များများကကုန်သည်များဖြစ်ကြသည် ရိုးရှင်းခြင်းဖြင့်တအံ့တသြ နေ့ကိုကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအဖြစ်အခမဲ့ညွှန်ပြချက်ပေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အချက်ပြမှုများ၏။
အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / နေ့ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာသည်အောက် Indicator
ဒါဟာစျေးကွက်ထ Trends ချ Trends, ဒါမှမဟုတ်ဘေးထွက်လမ်းရွှေ့တဲ့လူသိများတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်; ထိုသူအပေါင်းတို့အချိန်ဘောင်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်ပါ၏ နှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်နေသောလူများတို့သည်မတ်ပိုက်ဆံဖြစ်ကြသည်။
အဘယ်အရာကို အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator မဒါခေါ် detect ဖို့ဖြစ်ပါတယ် "အတု Breakouts" အဖြစ်ထင်ရှားပေါ်ထွန်း "နှစ်ချက်ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်" or "နှစ်ချက်အောက်ဆုံး"။ ထိုသို့သောအချက်ပြမှုများကိုဖြစ်ပေါ် အဆိုပါစမတ်ငွေလမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်နောက်ကြောင်းပြန်သည့်အခါ.
၏လူကြိုက်များ၏အမြင်တွင် အခမဲ့ညွှန်ပြချက် နှင့် downloads, ၏အစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောနံပါတ်, ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူကကွာပေးခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
အဆိုပါညွှန်ကိန်းအားလုံးအချိန်ဘောင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ကတည်းကတကယ်တော့, နေ့ကုန်သွယ်အဖြစ်ရေရှည်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator ထိုကဲ့သို့သော Forex, Commodities, စတော့ရှယ်ယာများနှင့် Indicator အဖြစ်အားလုံးအရည်ဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်များတွင်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ယင်းကိုမည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲ?
အဆိုပါအခမဲ့ညွှန်ပြချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဦးတည်း truism ၏နေရာတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်: အားလုံးဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်တူညီသောလမ်းအတွက်စမတ်ပိုက်ဆံအားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြသည်။
နှစ်ဆထိပ်တန်း / ကရိုးရိုးယူအမြတ်ထုတ်နေသောကြောင့်အောက်ခြေညွှန်ပြချက်ရိုးရှင်းစွာတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအလုပ်ဖြစ်တယ် ထိုစမတ်ပိုက်ဆံဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏သံသရာအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှ:
1 ။ စုပုံခြင်း
2 ။ Trapping
3 ။ လမ်းကြောင်းသစ်ပြောင်းပြန်
အခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / အမြတ်ကုန်သွယ်ရေးသည်အောက် Indicator
အောက်ပါဗီဒီယိုညွှန်ပြချက်၏ကုန်ကြမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ဖော်ပြသည်။ သင်ကထဲကတစ်ခုကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် 35 အချက်ပြမှုများ, ကုန်သွယ်ရေးနှုန်းတစ် 2% အန္တရာယ်နှင့်အတူ, သင် 128% အမြတ်အစွန်းရရှိနိုင်! သို့သော်သင်ကသင်၏ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာများကို FREE အညွှန်းကိန်းမှအချက်ပြကုန်ကြမ်းအချက်အလက်များသို့ယုတ္တိကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသဘောတရားများကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အသုံးချခြင်းအားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဒါကကျနော်တို့နောက်လုပ်ဖို့ထွက်ထားကြ၏။
ဤသည်ကိုအခမဲ့ Indicator နှင့်အတူနေ့ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
ယခုကြှနျုပျတို့အချို့နေ့ကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူရမည် တဦးတည်းကြီးမားသောအစွန်းသို့မျိုးစုံအနားပေါင်းစပ်။ ဒီအဆုံး, သင်ကချမှတ်စေခြင်းငှါ ထိပ်တန်းချချဉ်းကပ်သင်ပိုကြီးရုပ်ပုံတွေနဲ့သဘောတူညီချက်၌နေသောအောက်ပိုင်းအချိန်ဘောင်အတွင်းကသာအချက်ပြကုန်သွယ်မှုမထွက်ရသည်, ပိုကြီးတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမြင့်အချိန်ဘောင်၌ပြစ်မှားမိ။
ဥပမာ, တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှထိပ်တန်းချချဉ်းကပ် D1 နှင့် H4 အချိန်ဘောင်ပေါ်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းများဆွဲအားဖြင့်မြင့်မားသောအချိန်ဘောင်အတွင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်, ကုန်သွယ်ရေးကိုသာလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်း၏ဦးတည်ချက်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း H1, M30, M15 နှင့် M5 အပေါ်ကိုသာအချက်ပြမှုများနှင့် သင့်ရဲ့အနိုင်ရအစွန်းလေမှ, ကုန်သွယ်ရေးသူတို့သာ လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းမှာသို့မဟုတ်အနီးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအချက်ပြ.
တိုက်ရိုက်အဆိုပါ Trend လိုင်းမှာနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / အောက်နေရင်မြန်အောင်
အကောင်းဆုံးကို Setup ၏အချို့ သငျသညျကုန်သွယ်မှုနိုငျကွောငျးများမှာ တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနှစ်ချက်ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံး.
ဒါဟာစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ် line ကနေချက်ချင်းပယ်ချခဲ့ပြီးတော့ယိဆက်လက်ရရှိကြောင်းအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အနိုင်ရအစွန်းရုံသငျသညျကိုတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းမှာနှစ်ဆထိပ်သို့မဟုတ်ခွဖမ်းလျှင်အများကြီးပိုကောင်းရရှိသွားတဲ့။
တစ်ခုက Uptrend ဖေါ်ပြသည်ရီးရဲလ်ဇယားဥပမာများ
အောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံဟာ H4 အချိန်ဘောင်ပေါ်မှာရေးဆွဲတဲ့မြင့်တက်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းဖော်ပြသည်။ စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းထိရှိရာအစိမ်းရောင်မြှားခြင်းဖြင့်မှတ်သားအမှတ်မှာနှစ်ဆအောက်ခြေ entry ကို signal ကိုတစ်ဦးအနိမ့်အချိန်ဘောင်ပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နောက်တစ်နေ့စခရင်ပုံကိုတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းမှာ H1 အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သော entry ကို signal ကိုပြသထားတယ်:
တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းအနီးမှာဖြစ်ပွားကြောင်းနှစ်ချက်ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးလည်းအလွန်ကောင်းသော Setup များမှာ။ မြင့်မားအချိန်ပေါ်ရေးဆွဲတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်း D1 သို့မဟုတ် H4 ဘောင်ခတ်လျက်, လမ်းကြောင်းသစ်၏ဦးတည်ချက်အတွက်လာမယ့်အပြောင်းအရွေ့အဆင့်ပြီးသားစတင်ခဲ့သည်အနီးထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းမှာတော့စျေးနှုန်းထိမိသို့မဟုတ်ရောက်လာတယ်။ ပြောင်းရွှေ့အဆင့်၏အစဟာ H4 အချိန်အပိုင်းအခြားပေါ် Heiken Ashi ညွှန်ပြချက်၏အကူအညီဖြင့်မြင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Heikin Ashi လာမည့်အပြောင်းအရွေ့အဆင့်ပြီးသားစတင်ခဲ့သည်အတည်ပြုပြီးလျှင်ပြီးနောက်, သငျသညျအနိမ့်အချိန်ဘောင်ပေါ်တစ်ဦးကို double အောက်ခြေ / ထိပ်တန်း signal ကိုထွက်သည်ကိုကြည့်ရှုလို H5 မှ M1 မြင့်အချိန်ဘောင်ပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်း၏ညှနျကွား၌နေသော။ အနီးဆုံးခုခံ / ထောက်ခံမှုဧရိယာဝေးများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ ခုခံအား / ထောက်ခံမှုဇုန်နှိပ်မတိုင်မီရွှေ့ဖို့စျေးနှုန်းအများကြီးပိုတဲ့အခန်းလည်းမရှိသောကွောငျ့ထိုကွောငျ့, ထိုကဲ့သို့သောအချက်ပြမှုများကိုကြီးမြတ်အမြတ်အစွန်းအလားအလာရှိသည်ဖို့လေ့လိမ့်မယ်။
ရုပ်ပြအဖြစ်, စျေးနှုန်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ဖို့လမ်းကြောင်းသစ် line ကနေပယ်ချရောက်လာပါတယ်။ အဆိုပါ H4 အချိန် frame ရဲ့ Heiken Ashi ပြီးတာနဲ့ကစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်၏ညှနျကွားထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်တစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည်, စိမ်းလန်းသောလှည့်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် H1, M30, M15 နှင့် M5 ၏အောက်ပိုင်းအချိန်ဘောင်ပေါ်နှစ်ဆအောက်ဆုံးအချက်ပြဘို့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မည်။
ရုပ်ပြအဖြစ်, စျေးနှုန်းကျဘက်ကိုဖို့လမ်းကြောင်းသစ် line ကနေပယ်ချရောက်လာပါတယ်။ အဆိုပါ H4 အချိန် frame ရဲ့ Heiken Ashi ပြီးတာနဲ့ကစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်၏ညှနျကွားထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်တစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါသည်, အနီရောင်လှည့်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် H1, M30, M15 နှင့် M5 ၏အောက်ပိုင်းအချိန်ဘောင်ပေါ်နှစ်ဆထိပ်တန်းအချက်ပြမှုများကိုစောင့်ဆိုင်းရလိမ့်မည်။
တစ်ခုက Uptrend ပိုရီးရဲလ်ဇယားဥပမာများ
အောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံဟာ H4 အချိန်ဘောင်ပေါ်တစ်ဦးမြင့်တက်လမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းဖော်ပြသည်။ စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်လိုင်းနီးစပ်သညျ လာ. ထို့နောက်ထောက်မှပယ်ချခံခဲ့ရသည်။ အစိမ်းရောင်မြှားနှင့်အတူအမည်တပ်ထားသောပြောင်းရွှေ့အဆင့်စဉ်အတွင်းနှစ်ဆအောက်ခြေ entry ကို signal ကိုပု M5 အချိန်ဘောင်ပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အောက်ပါမျက်နှာပြင်ပုံဟာ M5 အချိန်ဘောင်ပေါ်တွင် entry ကို signal ကိုသရုပ်ဖော်:
ဒီအညွှန်းကိန်းအလွန်အမြတ်အစွန်း "နှစ်ချက်ထိပ် / အောက်" setups ကို detect ။ ဒီအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူသင်အစောပိုင်းကြီးမားတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ပိုကြီးမားသောလမ်းကြောင်း၏လမ်းကြောင်းသို့သာကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်နိုင်သည်။
ဒီအခမဲ့ Ultimate ကိုနှစ်ချက်ထိပ်တန်း / Bottom Indicator သည်သင့်ရဲ့မိတ္တူကိုရယူပါ